ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ကို သံသရာက မလွတ်သရွေ့ ဒီလိုနိုင်ငံမှာ လူပြန်မဝင်စားပါစေနဲ့တော့ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ G Fatt – Cele Top Stars
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တွေကတော့ လက်ရှိ မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်အဆိုတော် G Fatt ကလည်း လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို ဖမ်းစီးထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာတော့ နေပြည်တော် သပြေကုန်းမှာ ဆန္ဒပြရင်း ဦးခေါင်းကို သေနတ်ကျည်ဆန်ထိမှန်သွားတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး G Fatt က သူ့ရဲ့ညီမအရွယ်သာရှိသေးတဲ့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်အတွက် အခုလိုပဲ ဆုတောင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
“ညီမ​လေး​ရေ သံသရာက မလွတ်သ​ရွေ့ ဒီလိုနိုင်ငံမှာ လူပြန်မဝင်စားပါ​စေနဲ့​တော့ကွယ် . အကိုတို့ ညီမ​လေးကို အာဇာနည်အဖြစ် ​လေးစားဂုဏ်ပြု​နေမှာပါ ညီမ​လေးက ၁၉နှစ်တဲ့..ဘဝမှာ ကိုယ်ရူးသွပ်ချင်ရာကို တစ်စိုက်မက်မက်ရူးသွပ်လို့ရတဲ့အရွယ်​ပေါ့ကွယ်
​ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ ​ရောက်ရှိ နားခိုပါ​စေကွယ်။ အကိုပြုဖူးသမျှကုသိုလ်​တွေ အမျှပါကွယ် မိသားစုနဲ့ထပ်တူ​ကြေကွဲရပါတယ် .. ညီမ​လေး ​အော်ဟစ်​တောင်းတ ခဲ့တဲ့ ဒီမိုက​ရေစီ ၊ သမ္မတကြီးနဲ့ အ​မေစု လွတ်​မြောက်​ရေး အစ်ကိုတို့ ဆက်တိုက်ပွဲဝင်​တောင်းဆိုသွားမယ်ညီမ​လေး​ရေ ..”ဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
G Fatt ကတော့ ကွယ်လွန်သူလေး မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်အတွက် ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ ဆုတောင်းစကားလေးကတော့ ဖတ်ရသူတွေရင်ထဲမှာပါ စို့နစ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားစေတာ အမှန်ပါပဲ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ် ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်….။
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှခေဈြတဲ့ နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျတှကေတော့ လကျရှိ မွနျမာ့ပွညျတှငျးရေးအတှကျ လှုပျရှားနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူငယျအဆိုတျော G Fatt ကလညျး လကျရှိ မွနျမာပွညျတှငျးမှာဖွဈပကျြနတေဲ့ ပွညျသူ့အစိုးရကို ဖမျးစီးထားတဲ့ စဈအာဏာရှငျတှကေို ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၉) ရကျနမှေ့ာတော့ နပွေညျတျော သပွကေုနျးမှာ ဆန်ဒပွရငျး ဦးခေါငျးကို သနေတျကညျြဆနျထိမှနျသှားတဲ့ မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျတဈယောကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီဖွဈပွီး G Fatt က သူ့ရဲ့ညီမအရှယျသာရှိသေးတဲ့ မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျအတှကျ အခုလိုပဲ ဆုတောငျးပေးထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
“ညီမ​လေး​ရေ သံသရာက မလှတျသ​ရှေ့ ဒီလိုနိုငျငံမှာ လူပွနျမဝငျစားပါ​စနေဲ့​တော့ကှယျ . အကိုတို့ ညီမ​လေးကို အာဇာနညျအဖွဈ ​လေးစားဂုဏျပွု​နမှောပါ ညီမ​လေးက ၁၉နှဈတဲ့..ဘဝမှာ ကိုယျရူးသှပျခငျြရာကို တဈစိုကျမကျမကျရူးသှပျလို့ရတဲ့အရှယျ​ပေါ့ကှယျ
​ကောငျးရာဘုံဘဝမှာ ​ရောကျရှိ နားခိုပါ​စကှေယျ။ အကိုပွုဖူးသမြှကုသိုလျ​တှေ အမြှပါကှယျ မိသားစုနဲ့ထပျတူ​ကွကှေဲရပါတယျ .. ညီမ​လေး ​အျောဟဈ​တောငျးတ ခဲ့တဲ့ ဒီမိုက​ရစေီ ၊ သမ်မတကွီးနဲ့ အ​မစေု လှတျ​မွောကျ​ရေး အဈကိုတို့ ဆကျတိုကျပှဲဝငျ​တောငျးဆိုသှားမယျညီမ​လေး​ရေ ..”ဆိုပွီး ဆုတောငျးပေးထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
G Fatt ကတော့ ကှယျလှနျသူလေး မွသှဲ့သှဲ့ခိုငျအတှကျ ဆုတောငျးပေးထားတဲ့ ဆုတောငျးစကားလေးကတော့ ဖတျရသူတှရေငျထဲမှာပါ စို့နဈပွီး ဝမျးနညျးသှားစတော အမှနျပါပဲ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ခဈြ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုက်ပါတယျနျော….။
CDM မှာ ပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူမ ကျေးဇူးဆပ်သွားမယ့်အစီစဉ်လေးကိုပြောပြလာတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်